नयाँ प्रतिभाको साहित्यिक समाजद्वारा आयोजित लघुकथा प्रतियोगितामा सान्त्वना चित्रमान तामाङको"विदुषी" - PT Online News
नयाँ प्रतिभाको साहित्यिक समाजद्वारा आयोजित लघुकथा प्रतियोगितामा सान्त्वना चित्रमान तामाङको”विदुषी”
२० चैत्र, २०७७ १३:५३
नयाँ प्रतिभाको साहित्यिक उत्थान साहित्य समाज नेपालले आयोजित लघु कथा प्रतियोगिताको सान्त्वना भएको लघुकथा
सान्त्वना : कोड.१२
नाम: चित्रमान तामाङ
विदुषी हिमालय पर्वतको काखमा रहेकाे एक गाउँमा जन्मेकी थिईन् । गरिब थियोे । उनिलेे जसाेतसाे SEE पास गरिन् । उच्च शिक्षा पढ्न शहर पसिन् ।मनको क्षितिजमा मिरमिरेकाे राताे गाेलाे सूर्य उदाएको जस्तै उदाई रहेको उज्यालो सपनाहरू बाेकेर कल्पनामा उदाइ रहन्थिन् । पढाईमा भने कहिल्यै दाेस्राे नहुने मान्छे । पढाइमा अब्बल हुँदै गइन् तर जिन्दगीमा पनि उमेरसँगै ईच्छा, चाहनाहरुले बाटो माेडिदिन्छ । उमेरसंगै याैवनकाे ढकमक फुल फुलेर बास्न चलेको देखेपछि भमराहरू नझुम्ने कुरै भएन ।उनिले पनि कता कता जिन्दगीमा एक्लो महसुुस गर्न थालिन् ।सबै साथीहरू जाेडी बाँधेर शहरमा फनपार्क र प्रेमपार्कतिर घुम्न थाले भने गाउँ घरतिर लालिगुरासकाे वनपाखा र छहर छाँगाकाे कन्चनमा रुझ्दै, भिज्दै तस्बिरहरू खिचेर जिन्दगीलार्इ मनाेरन्जनकाे सागरमा डुबुल्की मार्दथे। तर बिदुषीले मनमनै साेचिन् याे बेला त जीवन बनाउने, भबिस्य बनाउने, समाजमा याेगदान गर्ने र ईतिहासमा नाम लेखाउने बेला हाे । यसरी हुदैन भन्थिन् । र सबै मनाेरन्जनका रहरहरु सपनाको लागि मनकै कारागरमा बन्दी बनाउथिन् । त्यो बेलाकाे समय न हाे एकछिनमा कारागार मुक्त गरेर प्रेममा रुमालिन पुग्थिन् । एकछिनमा बन्धक बनाउं थिइन् । यसरी बिदुषीको दिनचर्या बित्न थाल्यो । नभन्दै समयकाे माग, उमेरकाे माग अनुसार हाेला उनिलाई त्यही कक्षामा पढ्ने दलित साथी मनपर्न थाल्यो। बिदुषी उसलाई कक्षाकोठामा अरुले थाहा नपाउने गरि धित् मरुन्जेल हेर्थिन् ।माया बसेपछि बस्यो बस्यो । जति हेरे पनि चित्त बुझाउन सक्दिन थिन् । उनिले पढाइमा ध्यान दिन छाेडिन् ।भविष्यकाे जगहरू भुल्न थालिन् । जीवन साथीकाे यादमा एकाेहाेरिन् । मनकाे कुरा खाेल्न खाेज्थिन् । तर सक्दिन थिईन् । बिदुषीले जसाेतसाे मनका कुरा खाेलिन् ।मन परेको जीवन साथीकाे नामकरण पनि गरिन् काले भनेर ।बिदुषी कालेलाई पनि मन परेकाे रहेछ तर जातकाे अंशवण्डमा परेकाे कारण माया पनि दाबी गर्न सकिदैन भनेर मनमै दबाएर बसेकाे रहेछ । अाखिर साँचो प्रेमकाे अगाडि कसकाे के लाग्छ र ? उनिहरूकाे प्रेम जाेडी बसन्त ऋतुकाे माैसम बन्न थाल्यो । मनकाे रानिवनमा मायाको हरियाली पालुवा पलाउन थाल्यो । एक अर्कामा भेट नहुँदा चैतमासकाे खडेरीमा सिरसिर बतास चलिरहेको डाँडामा बसेर सुने जस्तै मनकाे रानिवनमा वारिपाखा र पारिपाखामा न्याउलीकाे विरह भाकाहरू गुन्जे जस्तै मनमा गुन्जिन पुग्छ । यादहरू छात्तिभरि सल्बलाउँदा अाँखाबाट अाँशुका थाेपाहरू तप तप बर्षिन थाल्थ्याे । याे उनिहरूमा सहने क्षमता थिएन । एकदिन उनिहरूले कलेजमा भेट गरेर जिन्दगीको सपना र भविष्यकाे याेजनाहरू बनाउन थाले ।
चाैतारीकाे शितल छाहरीमा बसेर…….
बिदुषीले भनिन्- दिलकाे राजा, काले यसरी कतिन्जेल बस्ने ? तिमी बस्न सक्छौं र एक्लै ?
काले- सक्न त कहाँ सक्छु र? तिमी बिनाकाे जीवन म साेच्न पनि सक्दिनँ भनेर गित गाउन थाल्याे ।
बिदुषी- वाह, काले, गजबकाे स्वर, म गित लेख्छु , तिमी गाउँ है । केवल प्रेमकाे, अजम्मरी नाताकाे हाम्राे जाेडी अजर अमर रहने ल।
काले- ल ल , स्वर त राम्राे छैन, तिम्राे लागि तयार छु है।
यसरी उनिहरू घण्टाैंसम्म प्रेम भाषामा वार्तालाप गरेर जिन्दगीमा कहिल्यै नछुट्ने भनी दिलकाे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे । प्रेम सम्बन्धलाई हातकाे अाैँला काटेर रगतले सिउदाे रंग्याईदियाे जनम जनम जिउने भनेर । जिन्दगीको नयाँ अायमहरू सुरु गरे । दुई धड्कन एक बनाए ।
शहरमा कतिन्जेल बस्न सकिन्थ्यो र? अाफ्ना-अाफन्त काेहि थिएन । पढाइ बढाउन पनि कस्ले पैसा दिने र? राम्राे काम गर्न चिनेको मान्छे छैन । केही सीप नचलेपछि उनिहरू गाउँमा फर्के । मान्छेको जात न हाे तल्लाे जात र माथिल्लो जात भनेर हल्ला चलिरहेको रहेछ ।कुरा लगाउनेकाे लर्काे रहेछ । गाउभरि कुरा काट्नेहरू र कुरा लगाउनेहरूकाे हावाहुरीले मनकाे घरबार हल्लाउन खाेज्दै थियोे । खुसीको निलाे अाकाशमा कालाे बादल माेडरिन थाल्यो । असिना पर्न थाल्यो । तर उनिहरूले हार मानेन ।सिकाइ मान्न थाले ।प्रतिकार स्वरूप जनचेतनाका बत्तीहरू बालेर जातभात र सबै प्रकारका विभेदको विरुद्ध ज्याेती छर्न थाले ।तर समुन्द्रकाे किनारमा बलिरहेकाे मैनबत्तीलाई ज्वारभाटा उर्लेर अाएपछि निभाईदिन्छ नै । समजासँग द्विप निभेर के भाे ? मायाभित्र विश्वासको बन्धन छ । संसारकाे कुनै अणुवमले पनि ध्वस्त हुन नसक्ने शक्तिको अवतार मायामा परिणत गरेर प्रेमिल शैलिमा जीवन जिउन थाले । छुवाछूतको विरुद्धमा नमुना जाेडी देखिन थाले । एक अर्काकाे बाेलिचालि लवाई खवाइमा धड्कनबाटै प्रेमिल व्यवहार हुन्थे । याे देखेर समाजमा भड्काउन खाेज्नेहरू छाँगाबाटै खसे जस्तै भैसकेका थिए । तर पनि कुरा लगाउने र काट्नेहरू कुन समाजमा थाक्छ र ? छुवाछूत र विभेद हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षितहरूबाटै व्यवहारमा विभेदको गहिरो खाडल खनेर बसेको पाइन्छ । मुखमा राम राम बगालीमा छुरा बाेकेर बसेका हुन्छन्।
यसरी सुन्दर जाेडी देखेर धर्ती , अाकाश, नदी नाला समेत खुसी हुन्थे । छहरा छाँगा र कुना कन्दराले तिमीहरूको जात मिल्दैन भनेर कहिल्यै भनेन । बरु प्रकृतिको काखमा बिदुषी फरर परेर सल हावामा तैराउँदै अाफ्नाे श्रीमानको अंगालाेमा झ्याप्पै बेरिन पुग्थिन् ।अाहा क्या लाेभलाग्दाे मायाका दृष्यहरू । फुर्सदकाे समय हाेस् कि कामकाे समय हाेस् जिन्दगीका यात्राहरू मायाका घुम्टाेमा खुसीकाे बासुरी धुन दिलमा बजाएर अानन्दमा माेहित हुन्थे। घन्टाैसम्म प्रेमिल गफकाे मातमा नतमस्तक हुन्थे ।उनिहरूकै लागि जून ताराले मायाकाे यात्रामा उज्यालो ज्याेती र शितलता दिएर मजबुत बनाउन सम्बन्धकाे डाेरी कसिरहन्थ्याे । यसरी विताईरहेकाे जीवनमा समयलाई पनि ईर्ष्या लागेछ क्यारे । उनिहरूकाे खुसी खासै टिकेन ।बिदुषीकाे श्रीमानलाई हृदयाघातकाे कारण विवाह भएकाे २ वर्षमै जिन्दगीको बिच बाटोमै अलपत्र पारेर पुर्णविराम लगाईदियाे । बिदुषी बिछिप्त बनिन्, मर्महट बनिन्, निःशब्द भइन् । माैनताकाे अाँधिबेरीले मुटुमा च्वस्वा च्वस्वा हान्दा अाँखाबाट बेदनाकाे, पीडाकाे दुखाईपुर्ण भेल उर्लिन्थ्याे ।कहिलै नराेकिने गरि जिन्दगीभर उर्लिरहने भयाे । उनी एकाेहाराे भइन् । सपना र विपना एउटै हुन थाल्यो । अाँखा अगाडि हिजाेसम्म हात समाएर हिँड्ने जीवनसाथी अाज नबाेली भूईमा हरियाे बाँसमाथि लमतन्न छ । गाउँलेहरूले सम्झाउन थाले । दैवले लेखेकाे यति नै रहेछ । नराेऊ राेएर के गर्छौ र ? भन्दै सिन्दुर पखाली दिए, हातका चुराहरू फुटाई दिए । उक्त श्रीमानलाई सेताे कपडामा सजाइयाे यता बिदुषीलाई पनि उस्तै गरि सेताे कपडामा सजाइयाे । त्याे सेताे कपडा सम्बन्ध विच्छेदकाे थियाे । अाँगनबाट मलामीहरूले जाेर शंख फुकेर लासलाई उठाउँदा यता मुर्छ परेर ढलिन् । रुँदा रूँदै दिनरात काटिन् । काज क्रिया पनि सकियाे । सपना हाे कि विपना साेच्थिन् ।सबै सपना भैदिए हुन्थ्यो भन्थिन् । तर त्याे कहिल्यै सपना बनेन विपनै बनिदियाे । घटनाहरू विपना बनेपछि समाजले गर्ने व्यवहार दाेहाेरिन थाल्याे । श्रीमान टाेकेकाे भन्न थाल्यो ।पानी पधेराेमा पनि बिहानै देख्नेबित्तिकै के देख्न पर्याे भनेर तर्किन थाले । बाटाे हिँड्नेहररू पनि सेताे लुगा देखेर कुसाइत भयाे भन्न थाले । गाउँलेहरू उनलाई देख्नेबित्तिकै कानेखुसी गर्थे । कतिले सान्त्वना पनि दिन्थे । तर गाली गलाैचा गर्नेहरू बढी नै थिए । उनी समाजबाट एक्लिन पुगिन् । उर्वर जिन्दगीमा मनकाे ईच्छा, चाहना र सपना अाेईलिन थाल्यो । ईच्छाहरू दबाएर बस्नुपर्ने बाध्यता भयाे । गाउँका केटाहरू बुढाे पनि खाइस् मलाई अस्थायी श्रीमान् बनाउ भन्दै शरीर छुन अाउँथे । गाउँका अधिकांशले यै माैका हेरेर ईज्जत चलाउन खाेजिरहन्थे। अाखिर अचेल त एउटालाई दुख्दा किन अर्कोलाई दुख्दैन ? किन रमाउँछन् ? किन तालि पिट्छन् ? अादि प्रश्नले जल्दा उनी कु-संस्कारकाे खाडलबाट निस्कने प्रयत्न गरिन् ।
मनमा द्वन्द्व बढ्न थाल्यो । मनले मनलाई भन्छ- तँ किन यति निरिह भएर बस्छेस् ? किन अबला नारिकाे संज्ञा लिन्छेस् ? किन अपच्य व्यवहार सहेर बस्छेस् ? किन समाजकाे अपराधीलाई प्राेत्साहन दिन्छेस् ? कतिन्जेल शरीरिक, मानसिक र सामजिक हिंसा सहेर बस्छेस् ? के समाज परिवर्तनमा तेराे भुमिका छैन र? यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूकाे ज्वार भाटा मनमा उत्पति हुन्छ अनि एकछिनमा बरर अाँसु खसाल्छिन् । अब यसरी हुँदैन ।समाज बदल्नु पर्छ भनेर अठाेट लिईन् । समाजकाे गतिविधिलाई प्रतिकार गर्दै उच्छृंखल व्यवहारकाे विरुद्ध जनचेतना जगाउन थालिन् । तर समाजका ती मान्छेहरूले बिदुषीलाई पागलकाे संज्ञा दिन थाले ।उपचार गर्न पागलखाना पठाउनु पर्छ भन्न थाले । कतिले ए पठाउन हुँदैन रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर ईज्जतमा धावा बाेल्न थाले । बिदुषीले हार मानिन् ।अदालतमा याैन हिंसा विरुद्ध, मानहानी, अभद्र व्यवहार, सम्मानपुर्बक बाँच्न नदिएको, स्वतन्त्रताको अपहरण भएकाे भनी मुद्दा हालिन् ।उनलाई शारीरिक प्रस्ताव राख्ने, हात हाल्ने लगायतका अपराधीहरूलाई अदालतबाट जेल सजय दिने कसुर अनुसारको अादेश भयो । उनिहरू जेल गए ।समाजमा व्याप्त अन्य महिला हिंसाका रहल पहल बढार्न उनी जुटिन् । गाउँका अन्य मान्छेहरू डराउन थाले । बिदुषीले शाेषण, उत्पिडन र दमनमा परेका एकल महिला, बिदुवा, गरिब तथा दलित महिलाहरूलाई हिंसाका विरुद्ध उठ्न लगाइन् । सबै महिलाहरू खुलेरै उठ्न थाले ।नारि दिवसको दिन जनचेतनामूलक सभा आयाेजना गरिन् । त्याे सम्मेलनमा पीडित, शाेषित र हिंसामा परेका महिलाहरूले बिदुषीलाई धन्यवाद दिदै रुन थाले ।हामी अब सबै प्रकारका महिला हिंसा विरुद्ध उठ्छौँ।हामीले हाम्रो याे उमेरमा ईच्छा अाकांक्ष दबाएर बस्यौँ, अब बस्दैनाैँ भन्दै मन्चलाई भावुकतामा परिणत गरे । अब ३६५ दिन व्यवहारमा नारि दिवस हुनुपर्छ भन्दै विदुवा महिलाहरूले सेताे कपडा फालेर ईच्छा अनुसारको कपडा पहिरिए। बिदुषी पनि सप्तरंगी ईन्द्रेणणीमा देखिन् । र खुसीको मुस्कानमा पहिलोपल्ट सजिन पुगिन् ।
नयाँ प्रतिभाको साहित्यिक समाजद्वारा आयोजित लघुकथा प्रतियोगितामा तृतीय रुद्र थापाको...
नयाँ प्रतिभाको साहित्यिक समाजद्वारा आयोजित लघुकथा प्रतियोगितामा द्वितीय गोपाल खनालको...